Abavelisi beeNsimbi eziMbiweyo zetsimbi - abaThengi beSinyithi esiBiyela abaXhasi kunye neFektri
Ishidi lesinyithi seGalvalume lenziwe ngesakhiwo se-aluminium-zinc, esine-55% ye-aluminium, i-43.4% ye-zinc kunye ne-1.6% yesilicon eqiniswe kwi-600. Yinto ebalulekileyo ye-alloy ehlala isetyenziswa kubomi bethu bemihla ngemihla.
Umphezulu wetsimbi yegalvalume ubonakaliswa ziinkwenkwezi egudileyo, ethe tyaba kwaye intle, kwaye umbala ophambili ubumhlophe obusilivere. Ulwakhiwo olukhethekileyo lokutyabeka lwenza ukuba lube nokumelana okuhle. Ubomi benkonzo yesiqhelo yephepha lesinyithi i-galvalume inokufikelela kwiminyaka engama-25, kwaye inokumelana nobushushu kwaye inokusetyenziswa kwindawo enobushushu ephezulu engama-315.℃; Ukuncamathela phakathi kwengubo kunye nefilimu yepeyinti kulungile, kwaye inenkqubo elungileyo Isakhono, kwaye sinokubethwa ngamanqindi, sisikwe, senziwe nge welding, njl.njengokuqhutywa komphezulu ulunge kakhulu.
Sheet intsimbi Galvalume uneempawu ezininzi ezibalaseleyo: nokumelana olomeleleyo, nto leyo amaxesha 3 ukuba sheet olunyulu kwalenza; Kukho iintyatyambo ezintle zinc phezu komhlaba, ezinokusetyenziswa njengeepaneli zangaphandle zezakhiwo.
Dx51d Galvalume Aluzinc Camera Steel Strip
Umtya wesinyithi seGalvalume unobumba obumhlophe obumhlophe, ubunjwe ngealuminium-zinc ingxubevange yesakhiwo, ebunjwe yi-55% yealuminiyam, 43.4% zinc kunye ne-1.6% yesilicon eqiniswe kuma-600 ℃. Yinto ebalulekileyo ye-alloy ehlala isetyenziswa kubomi bethu bemihla ngemihla. Umtya wesinyithi seGalvalume unamathele ngokugqwesileyo ngepeyinti, kwaye unokupeyintwa ngaphandle konyango lwangaphambili kunye nonyango lwemozulu.
Umtya wesinyithi seGalvalume unempawu ezininzi ezibalaseleyo: ukumelana nokubola okunamandla, amaxesha angama-3 e-strip esicocekileyo; Kukho iintyatyambo ezintle zinc phezu komhlaba, ezinokusetyenziswa njengeepaneli zangaphandle zezakhiwo.
Yenyuka GL galvalume Steel zophahla Sheet For Peru
Sheet intsimbi incence Galvalume luhlobo lwephepha lencindi ezenziwa ehlelayo ezibandayo ukugoba. Kufanelekile ukuhonjiswa kophahla, udonga kunye neendonga zangaphakathi nezangaphandle zezakhiwo zorhwebo nezoluntu, iindawo zokugcina iimpahla, izakhiwo ezizodwa kunye nolwakhiwo lwezindlu olunexesha elide.
Luhlaza okwesibhakabhaka oluQinisekiswe kwangaphambili ku-Gi Sheet sheet eAfrcia
Rhanga-camera camera nophahla sheet steel nophahla yenziwa sheet iphe zentsimbi kunye cofa mqengqeleki kunye abandayo ayeguqa ibe ezahlukeneyo amaza uhlobo sheet. Kufanelekile ukuba kwenziwe izakhiwo zorhwebo nezoluntu, iindawo zokugcina, izakhiwo ezizodwa, uphahla olukhulu lwesakhiwo sentsimbi, udonga kunye nokuhonjiswa kwangaphandle kwendlu, njl., Kwangaxeshanye, isetyenziswe ngokubanzi kwaye inezinto ezilandelayo: ukukhanya okusemgangathweni, Amandla aphakamileyo, umbala otyebileyo kunye nokuqaqamba, ulwakhiwo olululo, inyikima, ukuthintela umlilo, ukungangeni manzi, ubomi obude kunye nokugcinwa simahla, njl.
RAL 9001 Umbala Camera PPGL Steel Ikhoyili for zophahla
I-coil ye-PPGL yentsimbi yimveliso eyenziwe nge-galvalume yentsimbi, emva kokuphathwa kwangaphambili komhlaba (ukunyibilikiswa kwemichiza kunye nonyango lokuguqula), indawo enye okanye ezininzi zokwaleka kwendalo kugalelwe umphezulu, emva koko kubhakwe kwaye kwaphiliswa. Ukongeza ekukhuseleni i-alu-zinc layer, i-organic alting kwi-alu-zinc layer idlala indima ekugubungeleni nasekukhuseleni umbala we-coil yentsimbi, ukuthintela i-coil yentsimbi ekurhwebeni, kwaye ubomi bayo benkonzo bumalunga nama-1.5 amaxesha ubude kune Ikhoyili yensimbi yegalvalume.
I-ZM zn-al-mg yentsimbi yentsimbi yinto enqabileyo enqabileyo yokutshisa i-Zinc-Aluminium-Magnesium alloy sheet sheet. Ngenxa yeziphumo zemagniziyam kunye nealuminium, iZM inokumelana nokubola okukhulu, ukumelana nokuqala.
Umbala oLuhlaza we-Aluzinc Camera Steel Sheet for Peru
Iphepha lesinyithi elenziwe ngombala we-galvalume lenziwe ngephepha le-ppgl lesinyithi kunye ne-roller roller kunye nokuguqa okubandayo kwiindidi ezahlukeneyo zamaphepha. Kufanelekile ukuba kwenziwe izakhiwo zorhwebo nezoluntu, iindawo zokugcina, izakhiwo ezizodwa, uphahla olukhulu lwesakhiwo sentsimbi, udonga kunye nokuhonjiswa kwangaphandle kwendlu, njl., Kwangaxeshanye, isetyenziswe ngokubanzi kwaye inezinto ezilandelayo: ukukhanya okusemgangathweni, Amandla aphakamileyo, umbala otyebileyo kunye nokuqaqamba, ulwakhiwo olululo, inyikima, ukuthintela umlilo, ukungangeni manzi, ubomi obude kunye nokugcinwa simahla, njl.
I-A463 Aluminized Hot Dip Aluminium Camera Ikhoyili yentsimbi
I-coil yensimbi eshushu ishushu idibanisa iipropathi zoomatshini bekhoyili yentsimbi ebandayo kunye nokugcinwa kokumelana nealuminium, ukubonakalisa ubushushu, kunye nokumelana okungaphezulu komhlwa.